RASMI: Kooxda Arsenal Oo Si Rasmi Ah Ugu Dhawaaqday Dhamaystirka Difaacii Chelsea Ee David Luiz Iyo Lambarka Uu Qaatay Oo La Shaaciyay. - Gool24.Net
RASMI: Kooxda Arsenal Oo Si Rasmi Ah Ugu Dhawaaqday Dhamaystirka Difaacii Chelsea Ee David Luiz Iyo Lambarka Uu Qaatay Oo La Shaaciyay.
Maamulka kooxda Arsenal ayaa si layaableh ugu guulaystay in ay jamaahiirta kooxdooda kaga farxiyaan saxiixo lama filaan ah wuxuuna David Luiz ka mid noqday saxiixyada lama filaanka ah ee ay Gunners ku guulaysteen saacadihii suuqa kala iibsiga ugu danbeeyay.
Shalay ayuu David Luiz seegay tababarkii kooxda uu ka soo wareegay ee Chelsea isaga oo qasab ka dhigay in la aqbalo dalabkii uu ka helay kooxda Arsenal, waxayna wax walba ku bilawdeen si deg deg ah isaga oo hadda noqday ciyaartoy Arsenal ah.
Difaaca reer Brazil ee David Luiz ayaa ku biiray kooxda uu sanadaha badan London kula soo xifiltamayay ee Arsenal wuxuuna hadda si toos ah uga mid noqonayaa qorshaha xili ciyaareedka cusub ee Unai Emery.
Chelsea ayaa aqbashay dalab 8 milyan gini ahaa oo ay Arsenal ka gudbisay David Luiz wuxuuna dalabkani noqday kan sababta u noqday in xidiga reer Brazil uu ka soo degay Emirates Stadium.
David Luiz ayaa noqon doonta badalka tooska ah ee kabtankii Arsenal ee Laurent Koscielny kaas oo qaab xun kaga baxay Gunners.
Arsenal ayaa 4.5 milyan gini Laurent Koscielny kaga iibisay kooxda Bordeaux laakiin in ay David Luiz oo khibrad badan u leh Premier League ay ku heleen 8 milyan gini ayaa ah talaabo fiican oo ay maamulka Gunners.
David Luiz ayaa saxiixay heshiis laba sanadood ah waxaana dhamaystirka heshiiskan farxad wayn ka muujiyay tababare Unai Emery.
Unai Emery oo David Luiz hore ugula soo shaqeeyay kooxda Paris Saint-Germain ayaa isaga oo dareenkiisa ka hadlaya waxa uu yidhi: “David waxa uu leeyahay khibrad wayn,wanaag ayaan ka rajaynayaa in aan isaga markale la shaqeeyo. Waa ciyaartoy caan ah wuxuuna awood ku darayaa difaacayagii’.
Frank Lampard ayaa lumiyay adeegii David Luiz iyada oo waliba uu ganaax saarnaa kooxda Chelsea oo aan badalka Luiz heli karin.
Laakiin Arsenal ayay faa’iido wayn u noqon kartaa in ay heleen David Luiz oo waqti badan ka soo ciyaaray horyaalka Premier league.
Kadib lix sanadood oo uu David Luiz laba jeer oo kala duwan uu ka soo ciyaarayay Chelsea, waxa uu hadda si rasmi ah u noqday ciyaartoy Arsenal ah si uu Unai Emery uga caawiyo in uu xaliyo dhibaatadii difaac ee kooxdiisa soo haystay.
SIDOO KALE AKHRISO: LAMA FILAAN: Liverpool Oo Markaliya Si Lama Filaan Ah Real Madrid Ugu Ogolaatay Iibka Xiddig Laf Dhabar U Ahaa Kooxdeeda & Faah-Faahinta Heshiiska Uu Ugu Wareegayo.
David Luiz ayaa la siiyay maaliyada No.23 ee kooxdiisa cusub ee Arsenal laakiin heshiiska Luiz ee Arsenal ayaa lagu dhawaaqay waqti badan kadib markii uu suuqa England xidhmay balse waraaqaha dhamaystirka heshiiskan looga baahnaa ayaa la sii dhamaystiray.